Baarlamaanka DG Koofur Galbeed oo maanta dooranaya 5-Senatar. - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Baarlamaanka DG Koofur Galbeed oo maanta dooranaya 5-Senatar.
Baarlamaanka DG Koofur Galbeed oo maanta dooranaya 5-Senatar.
Baarlamaanka DG Koofur Galbeed ayaa maanta dhageysanaya hadal jeedinta 10 Musharax oo u tartamaya 5-Kursi oo kamid ah 8-Senator Aqalka Sare BFS ee saami ahaan kusoo aaday Dowlad-Goboleedkaas.
Dumarka waxaa loo gooyay labo kursi oo si gaar ah ay uga tartamayaan Haweenka sida uu sheegay Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed oo ah Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee DG Koofur Galbeed.
Yuusuf waxa uu tilmaamay in baaris la mariyay 10-ka Musharax ee uu soo gudbiyay Madaxweynaha DG Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen si looga hubiyo in ay dambiyo galeen.
Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee DG Koofur Galbeed waxa uu meesha ka saaray in lasii ogyahay shaqsiyaadka kusoo baxaya Kuraasta Doorashadooda maanta la qabanayo.
“10ka Musharax waxa ay buuxiyeen shuruudihii waxaana ay mareen baarista hubinta dambiyada, ilaa haatan wax kiis ah oo naloo soo gudbiyay ma jiro, sidaas awgeed waxa ay kawada qaybgalayaan doorashada maanta” ayuu yiri Guddoomiye Yuusuf.
Koofur Galbeed waa Dowlad-Goboleedkii labaad ee doorta Senatarada Aqalka Sare BFS, waxaana harsan kuraas kooban oo dib laga soo dooran doono sida ay sheegeen Guddiyada Hirgelinta Doorashooyinka Dadban Jubbaland & Koofur Galbeed.